Salaantii xalay ee Callum Hudson-Odoi iyo Tababare Solskjaer oo macno kale xambaarsanayd – Gool FM
(London) 19 Feb 2019. Ciyaartii xalay garoonka Stamford Bridge ku dhex martay kooxaha Chelsea iyo Manchester United 0-2 ee ka tirsanayd FA-ga ayaa waxaa la arkayay sawir uu tababaraha Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer si gooni ah u salaamayo ciyaaryahanka da’da yar ee Chelsea Callum Hudson-Odoi.
Wiilkan 18 jirka ah ee Ingiriiska u dhashay ayaa waxaa fursad siin waayay tababaraha Chelsea Sarri oo xalay ay ku dhacday guuldarradii 9-aad ee tan iyo markii uu xilka la wareegay.
Heshiiskiisa Chelsea ee Odoi ayaa waxaa ka harsan sanad, waxaana laacibkan uu isku dayay in uu kooxdiisa ku cadaadiyo in ay u ogolaato Bayern Munich.
Callum ayaa lagu warramayaa in uu weli xiiseynayo in dhammaadka xilli ciyaareedkan uu ka tago Chelsea.
Manchester United si toos ah ulama xiriirin Hudson-Odoi, laakiin waxaa la arkayay xiiso gaar ah oo ka dhexeeyay ciyaaryahanka garabka kaga dheela Chelsea iyo tababaraha Manchester United Solskjaer oo kaamirooyinku qabteen isagoo si gooni ah u salaamaya ciyaartoygani markii ay dhammaatay ciyaartii xalay.
Solskjaer iyo Sarri dhammaadkii kulankii labada kooxood ee xalay
Leonardo Bonucci "Real Madrid ayaa xagaagii hore isoo dalbatay waana diiday in aan ku biiro”